Ọtụtụ mgbe, e nwere mkpa iji tọghata a faịlụ site mbụ ya MP4 format n'ime MPEG usoro. MPEG dị mkpụmkpụ n'ihi na 'N'ịga Pictures ọkachamara Group], na-ezo aka ezinụlọ nke dijitalụ video mkpakọ ụkpụrụ na faịlụ formats kere site ISO Group. MPEG na-reputed na-emepụta mma videos karịa ya mpi formats dị ka QuickTime. N'adịghị ka na mbụ, mgbe PC chọrọ ngwaike codecs na-egwu MPEG faịlụ, nkà na ụzụ nke taa na-kpam kpam ịdabere na software codecs tinyere ndị ọzọ na ngwaahịa si omume dị ka Real Networks, ma ọ bụ Windows Media Player. Ọbụna na ya lousy mkpakọ na-ebelata data, MPEG bụ ịga nke ọma na-enwe mmadụ anya agbanahụ ya njehie.
Part1: Best MP4 ka MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 Video Ntụgharị
Part2: Free MP4 ka MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 Video Ntụgharị
Part3: Online MP4 ka MPEG / MPEG-1 / MPEG-3 Video Ntụgharị
Part4: Na ihe ọmụma n'ihi na MP4 na MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 Format
Wondershare Video Converter Ultimate Na Atụmatụ:
Ka a dị ike na desktọọpụ ngwa, Wondershare Video Converter Ultimate unen n'inyere ọtụtụ ahịa na ha video akakabarede mkpa. Na-egwuri egwu a ọnụ ọgụgụ nke formats aghọwo ugbu a mfe dị ka Wondershare Video Converter Ultimate abịa na ikike nke nhazi faịlụ si dị iche iche Ọkpụkpọ na-anapụta mmepụta ka kwa gị chọrọ. Na Wondershare Video Converter Ultimate, na-ekiri, nkekọrịta, na ịdị videos na ngwaọrụ ọ bụla e mere na-apụtakarị ka ọrụ ike ugbu a na-ahọrọ dị iche iche formats mgbe converting ha videos.
A bụ ndepụta nke atụmatụ na-eme Wondershare Video Converter Ultimate a mmasị n'etiti niile ọrụ na ndị ọkachamara:
• Ebe pụta dị ka ndị kasị Ntụgharị na ahịa, ọ sekọnd ya na-ama site a ọsọ nke bụ ugboro 30 ngwa ngwa karịa ot ngwa.
• Ndakọrịta ugbu a na e enwekwukwa ka ọrụ nwere ike tọghata ha videos fọrọ nke nta n'ime ihe ọ bụla format na-aga na ha elu na desktọọpụ ngwaọrụ.
• Site Wondershare Video Converter Ultimate, ọrụ ike ugbu a enuba ha media jidesie ha telivishọn n'ejighị ọ bụla ejikọta ngwaọrụ dị ka USB ma ọ bụ waya.
• Na onye impeccable DLNA Nkwado wuru na, ọ na-enye ohere ọrụ na-echekwa HVEC videos ke ekpri size enweghị adịkwa si na mma.
• Site n'enyemaka nke WiFi, ọrụ ike ugbu a nyefee ha videos ha Smartphone. Nke a eliminates mkpa nke na-enweghị isi cables.
• A wuru na edezi ngwá ọrụ ohere ọrụ ịgbakwunye dị iche iche ọcha ha videos. The edezi interface dị mfe ma nwere ike inweta site ọ bụla onye ọrụ ịgbakwunye scintillating video mmetụta.
• A otu click Video Downloader ga-enyere gị na-echekwa ihe ọ bụla video offline mgbe ị na-ele ya na nchọgharị gị. Ebu gị mgbasa ozi faịlụ dị nnọọ ghọrọ mfe na a ngwa.
Olee otú iji tọghata MP4 n'ime MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 Iji Wondershare Video Converter Ultimate?
Converting MP4 n'ime ihe ọ bụla nke nyere MPEG formats-achọ gị download Wondershare Video Converter Ultimate si website.
Download na wụnye Wondershare Video Converter Ultimate si website. Nwụnye usoro na-akpaghị aka na-amalite mgbe download na dechara dị na nchọgharị. The Ntụgharị dị mfe nwụnye usoro tinyere nzọụkwụ site nzọụkwụ nduzi na-eme ka ọ dị mfe maka onye ọ bụla iji wụnye a software.
Họrọ MP4 faịlụ na ị chọrọ iji tọghata. Ọ bụrụ na ị na-achọ izere tedious bulite nhọrọ, ị pụrụ nanị ịdọrọ na dobe faịlụ gị na mmemme interface. Otú ọ dị, interface na-abịa na nke omenala nhọrọ nke 'bulite'.
Ozugbo ị dechara bulite, ị nwere ike ime mgbanwe ụfọdụ gị video na ngwá ọrụ inculcated na interface. Nke a bụ ihe dị mfe iji ngwá ọrụ, na-abịa na multiple nhọrọ aka gị video.
Ozugbo edezi usoro bụ zuru ezu, họrọ akakabarede format si nri-aka-n'akụkụ, na pịa 'tọghata.' Nke a kwesịrị ebute akakabarede nke faịlụ. The na ọnọdụ na n'aka ekpe n'akụkụ ezipụta nchekwa ebe faịlụ ga-azoputa.
Video Tutorial: Olee otú Jiri MP4 ka MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 Video Ntụgharị maka Windows
Wondershare Video Converter Free Na Atụmatụ:
Wondershare Free Video Ntụgharị-enye gị ohere iji tọghata videos n'ime ihe ọ bụla format na a ọma ọsọ. Na-ezuru doo anya na atụmatụ, a Ntụgharị nwere ike ibudata site Wondershare na ala. Nwụnye usoro pụtara mfe. Ọzọkwa, ndị na Ntụgharị abịa na a ọtụtụ atụmatụ, ikwe ka ndị ọrụ na nnwale na ha video formats.
Awade a ngwa ngwa akakabarede ọsọ na outshines ọtụtụ ot converters na ahịa.
Ezi àgwà mmepụta faịlụ
Single button YouTube video nbudata nhọrọ na-ike n'ime Ntụgharị
Otu edezi ngwá ọrụ na irè interface ohere ọrụ na-eme ka mgbanwe.
Olee otú iji tọghata MP4 faịlụ n'ime MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 iji Wondershare Video Converter Free
Wondershare Video Converter Free Awade owuwu iji tọghata MP4 faịlụ n'ime MPEGMPEG-1 / MPEG-2 usoro.
Ozugbo ị na-eme na nbudata na nwụnye usoro (ị ga na-eduzi na ọ bụla nzọụkwụ nke echichi), na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị. N'oge a, ọ na-atụ aro na ị na-oge ụfọdụ ina-eji na interface.
Ị nwere ike bulite chọrọ video ga-converted. The interface-enye gị ohere nanị ịdọrọ video ka usoro ihe omume, na-enweghị ihe ọ bụla hassle nke na-ahọpụta ya si a kpọmkwem nchekwa. Otú ọ dị, ndị ọzọ nhọrọ kwa, e mewo ka dị.
Ozugbo i uploaded video ka usoro ihe omume (na nke a nwere ike buru a mgbe ọ bụrụ na video bụ oke buru ibu), ị nwere ike ịpụ maka edezi ngwá ọrụ nke enye gị ohere tinye multiple mmetụta gị video. The edezi ngwá ọrụ bụ pụtara mfe iji na-enye ohere maka nkwalite nke video.
Ozugbo i zọpụta ndị mgbanwe, họrọ chọrọ mmepụta format si nri n'akụkụ aka kọlụm (MPEG / MPEG-1 / MPEG-2), na-ebute akakabarede usoro site na ịpị 'tọghata'. Ị nwere ike ugbu soro ọganihu nke gị akakabarede ke interface.
MPEG / MPEG-1 / MPEG-2
Nkowasi MPEG (ihe acronym maka Motion Foto dị ọkachamara Group) bụ a akpa format iji ya iji chekwaa ma video na ọdịyo na-abịa dị iche iche ụkpụrụ dị ka MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4 na ọtụtụ ndị ọzọ.
MP4 bụ a akpa format-eji ụlọ ahịa video, audio, na ndepụta okwu data. Ebe ọ bụ na echekwa dị ka iTunes-eji nke a akpa Ọkpụkpọ na ọ na-eji na iPod na PlayStation (PSP). Ọ na-aghọ a na-ewu ewu usoro.
Mepụtara site na
Akpụ akpụ Foto dị ọkachamara Group
Mime ụdị Video Video
Okwu Mmalite ka MPEG
ezubere iche ndị MPEG Format
Ihe ọmụma zuru ezu na MP4 faịlụ Ọkpụkpọ
Olee otú iji tọghata na Ọkụ MP4 ka DVD
Olee otú iji Play MP4 on Galaxy S4
ỌZỌ ihe ọgụgụ
Free Mac DVD burner: Top 3 DVD-ere Ọkụ Software maka Mac
Best Video ka DVD Burners - Get Video ka DVD on Windows / Mac
Olee otú iji tọghata AVI ka DVD na Mac / Win
Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka MP4 ọsọ ọsọ na mfe
Olee otú Play MP4 on Galaxy S4
Olee otú iji tọghata MP4 ka iPad
Top 15 MP4 Trimmers maka Windows / Mac / iOS / Android
Top 50 Sites ka Download MP4 Songs
Olee otú iji tọghata MP4 ka MP4 na Windows na Mac?
MPEG4 vs MP4, ọdịiche dị n'etiti MPEG4 na MP4
Olee otú iji tọghata 2D ka 3D MP4 na ala
> Resource> MP4> Olee otú iji tọghata MP4 ka MPEG / MPEG-1 / MPEG-2?